Khilaaf ka taagan hab mamulka Madaxtooyada Somalia – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Khilaaf ka taagan hab mamulka Madaxtooyada Somalia
Allhadaaftimo April 15, 2019 Uncategorized
Waxaa sii xogeysanaya khilaaf culus oo u dhaxeeya Agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya Aamina Saciid iyo ku xigeenkeeda Cabdirisaaq Xuseen Caato.
Warar aan helnay ayaa sheegaya in mudooyinkii ugu dambeeyay uu sii xumaanayay khilaafka u dhaxeeya labada dhunac iyadoo aad looga dareemay Villa Somalia.
Qaar kamid ah shaqaalaha Madaxtooyada Soomaaliya ayaa noo sheegay in xafiisyada shaqada ay ka jirto xaalad taag taag ah iyo in lakala jiidanayo shaqaalaha Xafiisyada Madaxtooyada.
Aamina Saciid iyo ku xigeenkeeda C/risaaq Caato ayaa markii 2aad isku khilaafsan hab maamulka adeegyada Madaxtooyada iyadoo mid kasta uu raadinayo Isha dhaqae ee Madaxtooyada Soomaaliya.
Xubno sare oo katirsan Shaqaalaha Madaxtooyada ayaa sheegay in muranka uu ka bilaawday Shirkad keenta adeegyada Madaxtooyada taas oo hoos tagta Caato.
Previous M/weynaha Puntland Deni oo la kulmay Madaxa Shirkada DPWORLD
Next Guddiga Amniga Caasimadda oo Muqdisho ku yeeshay kulan looga hadlay sugidda Amniga